တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: မွန်းကျပ်တဲ့ည ... (၂)
Posted by မေဓာဝီ at 8:01 AM
sounds sad , ma may.
I love the poem and understood how you feel, and what you feel.
I am still trying to find out the words to console you.
စိတ်ရှုပ်နေပါတယ်ဆိုမှ မမေစာဖတ်ပြီး ပိုစိတ်ညစ်သွားပြီ...
hehhe.ma may talked very bad about night.. i wanted to laugh..bec i want to have those night..Here, we do not have night in summer. So dont knwo which is night or day..waking up looked up out of window, found the sun thought it was morning, but then watched the clock..hhaah.3am..hehe.hard to sleep lol..
မမေနဲ့အတူ ညီမလည်း ညတွေကို တခါတလေ အဲလို မွန်းကျပ်စွာ ခံစားမိပါတယ်ရှင် ။ ညပေါင်းများစွာရဲ့ အပိုင်းအစတွေကို ပြန်ကောက်နေတဲ့ ညီမတွက်တော့ သိပ်ရင်ထဲ ထိတဲ့ ပို့စ်လေးပဲ ။
6/21/2007 1:05 PM
Nya twe ma shi yin kg mel naw..
Nyinn thoe thoe nya tae...
hla tel byar..